सडक फर्नीचर - पछिल्लो शहर फार्म डिजाइन प्रवृत्ति र उत्पादनहरू
सानो शहरी वास्तुकला
सानो वास्तुकला साना भवनहरूको समूह हो जुन यसका प्रयोगकर्ताहरूले अन्तरिक्षको धारणालाई प्रभाव पार्दछ।
यो सानो वास्तुकलाको होसियारीसाथ चयन गरिएका तत्वहरूको प्रयोगको माध्यमबाट विकसित क्षेत्रले चरित्र, अभिव्यक्ति लिन्छ र, सबै भन्दा माथि, कार्यात्मक हुन्छ।
सडक फर्नीचरले वरपरको बगैंचामा वनस्पति र भवनहरूको प्रभाव पार्दछ, सृष्टिको लागि योगदान पुर्‍याउँछ स्थानिक आदेश.
सानो शहरी वास्तुकला के हुन्छ शहरहरूलाई छुट्याउँछ।
सब भन्दा विशिष्ट वस्तु, स्मारक वा स्थानको अगाडि होशियारीले डिजाइन सानो वास्तुकला यो त्यस्तो चीज हुन सक्दछ जुन पर्यटकहरूले धेरै याद राख्दछन्।
यो दिईएको शहरको साथ सम्बन्धित छ। यसले उनीहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा फरक पार्छ।
आज, अग्रणी, आधुनिक महानगरहरू एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्छन् र यो केवल पर्यटकहरूको लागि मात्र नभई त्यहाँका बासिन्दाहरूको लागि पनि सबैभन्दा आकर्षक भनिन्छ, जसको लागि सार्वजनिक स्थानको आकार निस्सन्देह ज्यादै महत्त्वको छ।
राम्रो डिजाइन गरिएको बेंचहरु, शेड, टेबल, फूल भाँडा र तत्वहरू खेल मैदानहरू सफलतापूर्वक छिमेकीलाई पुनर्जीवित गर्न सक्दछ, यसमा नयाँ आत्माको सास फेर्न, यसलाई अद्वितीय र अर्थपूर्ण बनाउँदछ।
नतिजाको रूपमा, बासिन्दाहरू र पर्यटकहरू यसलाई भ्रमण गर्ने बढी संभावना राख्दछन्।
यो पनि हेर्नुहोस्: शहरी योजना - वास्तवमा यो के हो?
सानो शहरी वास्तुकला - कार्यहरू
सडक फर्नीचरको सही चयनित तत्वहरू, लगभग अदृश्य तरिकामा, स्थानको उपयोगिता कार्यहरू कायम राख्न र समायोजन गर्न मद्दत गर्दछ.
रमणीय उदाहरणहरू हुन सक्छन् पोष्टहरूगोलाकार वा ठि traffic्गो यातायात बाधा फूलहरू फूलहरु संग।
उहि समयमा, ती एक सजावट हुन् र निषेधित शहरमा कारहरू पार्कि cars गर्न वा प्रोमनेडमा पहुँच प्रतिबन्ध गर्न रोक्दछन्।
यस प्रकारको अर्को उदाहरण रूख कभरहरू हुन्, जुन एकै साथ उनीहरूको बोक्राको सुरक्षा गर्दछ, क्षति सीमित गर्दछ, र विशिष्ट सजावटको गठन गर्दछ।
यद्यपि सडक फर्नीचर सबै भन्दा माथि छ पार्क र सडक फर्नीचर.
यसमा विभिन्न प्रकारहरू समावेश छन् बेंचहरु.
समाधानको विस्तृत श्रृंखलाले तत्वहरूको प्रयोग पूर्ण रूपमा वरपरको परिदृश्यमा एकीकृत गर्दछ।
सबै भन्दा लोकप्रिय काठका बेंचहरू हुन्, तर अधिक र अधिक प्रायः त्यहाँ स्टिल बेन्चहरू हुन्छन्, जुनसुकै र color्ग र आकारमा, साथसाथै सिभिल कंक्रीट बेंचहरू प्रायः मूर्तिकलाजस्तै देखिन्छन्।
बेन्चको अतिरिक्त, सहरी अन्तरिक्षका प्रयोगकर्ताहरूले पक्कै पनि सूर्य लाउन्जरहरू प्रयोग गर्न मनपराउँदछन्, जुन केवल बोलेभार्डमा मात्र पानीको किनारमा, तर पार्कमा सूर्यको प्रकाशको सामना गरेर फिट हुने गर्दछ।
यो पनि हेर्नुहोस्: भवन कानून र सानो वास्तुकला
शहर फार्म डिजाइन
कम्पनी आधुनिक सडक फर्नीचर उत्पादहरूको अग्रणी वितरक हो शहर फार्म डिजाइन.
यो सीधा संग काम गर्दछ स्थापत्य स्टूडियो र डिजाइनरहरू, उत्तम शैली र सानो वास्तुकला तत्वहरूको कार्यात्मक सुविधाहरू रोज्नको लागि।
यसका साथै यसले समर्थन गर्दछ ल्यान्डस्केप वास्तुकला संघ, प्रत्यक्ष सहयोग मार्फत, साथ साथै पछिल्ला समाधानहरू र उत्पादनहरू प्रदान गर्दै।
सिटी फोरम डिजाइन पोल्याण्डमा उत्कृष्ट इटालियन कम्पनीहरूको विशेष प्रतिनिधि हो - मेटलको, बेलतालिया र शहर डिजाइन.
मेटलको - इस्पात र काठ
सानो शहरी वास्तुकला एक विषय हो जुन इटालियाली कम्पनीले राम्ररी जान्दछ मेटलको.
यसले उत्पादनहरूको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ, मुख्य रूपमा निम्न कोटीहरूमा: सानो बगैचा वास्तुकला र सानो शहरी वास्तुकला.
मेटलकोको प्रस्तावमा उत्कृष्ट उत्कृष्टहरू समावेश छन् समाधानहरू पार्क, सडक, बगैंचा र स्टेशनहरूको स्टाइलिश र कार्यात्मक विकासको लागि।
मेटलको पार्क पार्क, बगैचा बेंच, शहर बेंच, स्टेशन बेंचहरू - दुबै काठ र कास्ट फलाम बेंच उत्पादन गर्दछ।
थप रूपमा, यस कम्पनीको वर्गीकरणमा सडक बास्केट, पोष्टहरू, सूचना बोर्डहरू, रूखहरूको कभरहरू, फूलहरूको भाँडाहरू, साइकल स्ट्यान्डहरू, ल्यान बाधाहरू र विभिन्न प्रकारका सडक फर्नीचरहरू: डेकचेयरहरू, घाटको लागि उपयुक्त, बुलेभार्ड, साथ साथै पार्क वा शहर बगैंचामा समावेश छ।
बेलतालिया - ठोस र ढु stone्गा तत्वहरू
बेलतालिया एक अग्रणी यूरोपीय निर्माण कम्पनी हो सहरी कंक्रीट समग्र र प्राकृतिक ढु .्गा, सानो वास्तुकला र ल्यान्डस्केप वास्तुकलाको लागि यसको समाधानहरूको लागि परिचित छ।
कम्पनीले 40० बर्ष भन्दा बढि काम गर्दै आएको छ, आफूलाई उच्च-गुणको उत्पादनहरू, नवीनता र आधुनिक डिजाइनद्वारा छुट्याउँदै।
सडक फर्नीचर प्रोजेक्टहरू बेलीतालिया कम्पनीहरू मुख्य रूपले प्रोफाइल गरिएको क concrete्क्रीट पार्क, बगैचा र शहर बेन्चहरू हुन्। छात्रावास बेन्चहरू प्राय: एक प्रभावी कास्ट हुन्छन्, विशिष्ट मूर्तिकला सिर्जना गर्दछ।
यसबाहेक, बेलतालियाले थुप्रै कंक्रीट र ढु p्गाको भाँडाहरू प्रदान गर्दछ, केवल एकल फूल वा फूलको ओछ्यानका लागि मात्र होइन तर सजावटी रूखहरूका लागि पनि।
थप रूपमा, बेलतालिया मा माहिर छ फोहोराहरूको सिर्जनामा, पोषणहरू विभाजन र खेल मैदानहरूमा ट्राफिक छुट्ट्याउने वा रोक्ने, साथै क concrete्क्रीट, ढु stone्गा वा नक्कल ढु stone्गाले बनेको फोहोर डिब्बा।
शहर डिजाइन - आधुनिक डिजाइन
सानो बगैचा वास्तुकला, स्टप बोर्डहरू, फेसनल रंगहरूमा सूचना बोर्डहरू।
पार्क बेन्चहरू आधुनिक डिजाइनको साथ आँखा लिने। सजावटी तत्व, फूल भाँडा, डस्टबिन, बस शेल्टर, वा प्रतिबन्धित पोष्टहरू सडक यातायात केवल कम्पनीको शहरी परिदृश्य वास्तुकला उत्पादनहरू मात्र हो शहर डिजाइन.
शहर डिजाइन उत्पादनहरूको उच्च गुणस्तरको मानक सामग्री र टेक्नोलोजिकल प्रक्रियाहरूको लगातार नियन्त्रण द्वारा सुनिश्चित गरिन्छ।
यसरी शहर डिजाइन यसको उत्पादनको उच्च स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्नका साथै मानक, सुरक्षा, पारिस्थितिकी, सौन्दर्य र प्रयोगकर्ता सुविधा सहितको ग्यारेन्टी गर्न सक्षम छ।
5 /5( 53 वोट )
ल्यान बाधालक गर्नुहोस्फूलहरूसडक बास्केटस्टेशन बेन्चेसशहर बेन्चेसगार्डन बेंचपार्क बेन्चेसकास्ट फलामको बेंचसानो वास्तुकला वितरकसानो शहरी वास्तुकलासानो बगैचा वास्तुकलासानो वास्तुकला निर्माण कानूनसानो वास्तुकला निर्माताबगैचामा सानो वास्तुकलासडक फर्नीचररूख गार्डहरूखेल मैदानहरूपोष्टहरूसाइकल रैकसूचना बोर्डहरू